Kusazoshuba kwabadla imbuya ngothi - Ilanga News
Home Izindaba Kusazoshuba kwabadla imbuya ngothi
Kusazoshuba kwabadla imbuya ngothi
UMENGAMELI Cyril Ramaphosa umemezele uxhaso lwesamba esiwu-R500 billion ngoLwesibili.
UMENGAMELI Cyril Ramaphosa umemezele uxhaso lwesamba esiwu-R500 billion.
Lolu xhaso luzobhekana nobubha luphinde lusize izinkampani ezintengayo ngenxa yokuvalwa kwengxenye enkulu yomnotho wakuleli ukuze kuliwe negciwane leCovid-19.
Umengameli uphinde wamemezela ukuthi uzonekela isizwe namuhla (ngoLwesine) imininingwane ngohlelo lukahulumeni lokuvula ukusebenza kwamabhizinisi.
Lokhu uthe kuzokwenziwa ngokulandela ubufakazi bososa-yensi bezempilo okuyibo obuzokhomba ukuthi iyiphi ingxenye yomnotho engavulwa, kodwa ukuvulwa kwayo kungadali ukwanda masinyane kweCovid-19.
Umemezela lokhu nje umengameli, ongoti kwezomnotho nezempilo basanda kuhlongoza ukuthi leli kumele lilandele isibonelo sezwe laseSouth Korea.
Ukulwa naleli gciwane, iSouth Korea yagxila kakhulu ekuhloleni izakhamizi ukuze kutholakale masinyane lezo ezinegciwane bese ziyehlukaniswa kwezinye ukuze zingandisi iCovid-19.
Le ndlela yenza iSouth Korea ikwazi ukugcina ingxenye enkulu yomnotho wayo isebenza, ingava-lwa njengoba kwenziwe kuleli.
UMnu Ramaphosa uthe imininingwane ngalesi samba somxhaso izokhishwa maduze nje.
Ingxenye ewu-R130 billion yalolu xhaso izoxetshulwa esabelwe-ni semali esethulwa nguNgqongqoshe wezeMali ngoNhlolanja (February) nonyaka.
UMnu Tito Mboweni uzokwe-thula ephalamende isichibiyelo kwisabelo semali maduze nje.
Uhulumeni, ebambisene neReserve Bank, uzosungula isikhwama sika-R200 billion esizosetshenziswa ukweseka amabhange azimele uma eboleka osomabhizinisi imali.
Lokhu kusho ukuthi uma osomabhizinisi behluleka ukuyibu-yisa le mali, amabhange ayokhokhelwa yilesi sikhwama. Nakhona futhi, imidanti ngokusebenza kwalesi sikhwama isazokhishwa.
Umengameli uthe lesi sikhwama sizosiza kuqala amabhizinisi angenisa imali ngonyaka engaphansi kuka-R300 million. Kulindeleke ukuthi kuhlomule kuso amabhizinisi awu-700 000 anezisebenzi eziwu-3 million.
Uhulumeni wenze izibonelelo ezizovumela osomabhizinisi ukuba bangajahi ukwedlulisela kwiSARS imali yentela njengoba kubekiwe emthethweni wokukho-khwa kwentela.
Lesi sinyathelo kulindeleke ukuba sisize osomabhizinisi ngesamba semali ewu-R70 billion, okuyimali abangayisebenzisa ukukhokhela izisebenzi nokugcina izindleko zamabhizinisi okwe-sikhashana kuze kusimame isimo sohwebo.
Ingxenye (R50 billion) yalolu xhaso eshayelwe ihlombe kakhulu, ukwenyuswa kwemali yokondla izingane (child support grant). Abazukushiywa ngaphandle asebedla endala nabakhubazekile.
Nabangasebenzi futhi abangatholi sizo kuhulumeni nabo bazo-bonelelwa ngo-R350 ngenyanga izinyanga eziwu-6.
Kulesi samba somxhaso kuhlanganiswe nezinye izinhlelo ezamenyezelwa ngasekupheleni kukaNdasa (March) ngesikhathi umengameli etshela isizwe ukuthi kuzovalwa ingxenye enkulu yomnotho.
Enye ingxenye yemali uhulumeni uzoyiboleka kwiWorld Bank, kwi-IMF nakwi-African Development Bank.
Ukuyokhangeza kwaleli kwi-World Bank nakwi-IMF, kuzofana nokugayeka kwenhlabathi uma indoda idla izinkobe engxenyeni yezakhamizi zakuleli ezingazifuni lezi zinhlangano ngoba zithi zibeka imigomo enzima kubantu abadla imbuya ngothi.
Wenza lesi simemezelo nje umengameli, abakwaStats SA bakhiphe umbiko ngasekuqaleni kwaleli viki okhomba ubunzima obuthwelwe yizimboni eziningi zakuleli ngenxa yokuvalwa kwengxenye enkulu yomnotho wezwe.
Ingxenye yomnotho ehlukumezeke kakhulu ngenxa yalesi sinyathelo sikahulumeni eyezimboni ezithathwa ngokuthi kazikhiqizi izinto abantu abangeke baphile ngaphandle kwazo.
Njengamanje izimboni ezivunyelwe ukuqhubeka zihwebe ngaphansi kwemigomo ethile yilezo ezikhiqiza ziphinde zithengise okudliwayo, amakhambi esilungu, nezokuthutha lezi zimpahla.
Umbiko weStats SA uveze ukuthi emabhizinisini exhumane nawo, angaphezulu kuka-85 ekhulwini abike ukuthi lehlile inani lemali ayenzile ngenxa yokuvalwa kwengxenye enkulu yomnotho.
Awu-50 ekhulwini abike ukuthi awalindele ukuthi azokwehlisa inani lezisebenzi kanti acishe awu-35 ekhulwini athe azodiliza.
I-Stats SA iphinde yabuza osomabhizinisi ukuthi zinyathelo zini asebezithathile ukuze bamelane nokuvalwa kwengxenye enkulu yomnotho.
Abawu-28 ekhulwini athe asehlise inani lamahora asetshenzwa yizisebenzi kanti awu-20 athe wona asedilize izisebenzi.
Osomabhizinisi abawu-38 ekhulwini babike ukuthi kabazitholi izidingo abazisebenzisa ukukhiqiza.
Abawu-12 bona bathe kudingeke ukuba bathole ezinye izimboni ezingabathengisela izidingo abazisebenzisa ukukhiqiza, noma bathole ezinye izixazululo.
Okwethusayo wukuthi osomabhizinisi abawu-40 ekhulwini bathe kabanalo ithemba lokuthi amabhizinisi abo anayo imali eyanele ukumelana nobunzima obudalwe wukuvalwa kwengxenye enkulu yomnotho wezwe.
Osomabhizinisi abawu-54 ekhulwini bona babike ukuthi amabhizinisi abo angaphila phakathi kwenyanga eyodwa nezintathu ngaphandle kokuthola imali engena ngokuthengisa umkhiqizo.
Abantu abawu-30 bona bathe bangaphila isikhathi esingaphansi kwenyanga kuphela.
Abawu-65 ekhulwini babike ukuthi umphumela wokuvalwa kwengxenye enkulu yomnotho wezwe ulindeleke ukuthi uhlukumeze amabhizinisi abo ngaphezu kwesimo sika-2008/2009, lapho umnotho womhlaba wonke wahlukunyezwa wukuwa kwezinkampani zezimali zaseMelika.
Konke lokhu kukhomba ubu-nzima obusazothwalwa yizakhamizi zakuleli, ikakhulukazi lezo
ezingasebenzi nezidla imbuya ngothi.
*USikhakhane, oke wasebenza njengomkhulumeli kaNgqongqoshe wezezimali kanye nebhange lezwe, useyiphini lomhleli weConversation Africa. Lokhu akubhala lapha akuyona imibono yomqashi wakhe.
Previous articleKumele iBhayibheli lichitshiyelwe ngesahluko sabase”Corona”
Next articleIzwe lethu liyokhululwa wukukhula komnotho